Caalamka Online » WAR DEG DEG AH: Militariga Somaliland oo Duleedka Garowe ku sugan, Saldhigyo ciidan oo laga samaynayo Deegaan Puntland u muhiim ah iyo Madaxwayne Muuse Biixi oo magacaabay taliyaha ciidamada Tukaraq ….
WAR DEG DEG AH: Militariga Somaliland oo Duleedka Garowe ku sugan, Saldhigyo ciidan oo laga samaynayo Deegaan Puntland u muhiim ah iyo Madaxwayne Muuse Biixi oo magacaabay taliyaha ciidamada Tukaraq ….
January 21, 2018 - Written by Khaliif - Edited byKhaliif
Xili ay weli sii xoogaysanayaan xiisadaha u dhaxeeya Puntland iyo Somaliland ayaa waxaa madaxweynaha Somaliland uu soo magacaabay Taliyaha ciidamada Somaliland ee deegaanka Tukaraq iyo Maayer cusub oo deegaankaasi yeeshay.
Maayerkan cusub ayaa waxaa lagu magacabaa Muuse, waxaana sidoo kale deegaankaasi laga dhagax dhigay saldhig ciidan oo uu yeelanayo isagoona la magacaabay taliyihii ciidamadaasi xukumi lahaa.
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo isagu todobaadkani kusoo wajahan magaalada Tukaraq ayaa ugu baaqay ciidamadiisa in ay galaan heegan xoogan sidoo kalena ay isku diyaariyaan dagaal ay kusoo xidhayaan xuduuda Somaliland ee deegaanka Yoocada halkaas oo ay ku taamayaan gaadhisteeda ciidamada maamulka Somaliland.
Waxaa sidoo kale deegaanka Tukaraq maalinta beri ah booqanaya madaxweyne ku xigeenka Somaliland iyo tiro wasiiro ah kuwaas oo ciidamada Somaliland ku dhiiri galinaya gaadhista deegaanka Yoocada, waxaanse sidoo kale dhankooda iyaguna difaac xoogan iyo weerar culus qorshaynaya ciidamada Puntland oo madaxweyne Gaas amar buuxa ku siiyey in ay soo gaba gabeeyaan sida ugu dhakhsaha badan dagaalka Somaliland kana qabsadaan deegaano badan si ay uga sifeeyaan guud ahaanba gobolka Sool.